Ulfaa’u osoo hinbariin du’a mucaasheetiif dubartiin himatamte bilisa baate - BBC News Afaan Oromoo
Ulfaa’u osoo hinbariin du’a mucaasheetiif dubartiin himatamte bilisa baate
Shamarreen waggaa 21, garaan dhukkubnaan mana fincaanii bakka dhaxeetti of walaaltee mana yaalaatti ofi barte tokko, mucaa deessee ajjeefte jedhamuun hidhaan waggaa 40 itti murtaa'uuf ture, amma bilisa baate.
Shamarreen Lammii El Saalvaador kun guyyaa to'annoo jala itti olfamtee kaaftee, du'a mucaashee keessa harka akka hinqabne himaa turte. Sababiin dhiyeessaa turtes, ulfa ta'ushee akka hinbeekneefi wayita ciniinsuun qabu of wallaalu himaa turte.
Dhimmi ishee kuni xiyyeeffannoo rogeeyyii walqixxummaa koorniyaa argatee akka gadhiifamtuuf gaafataa turan. Biyya keessaa fi biyya alatiin itti dhiheenyaanis hordofamaa ture.
Biyyi El Saavaador addunyaa kanarraa biyyoota seera farra ulfa baasuu cimaa qaban keessaa tokkoodha. Karaa kamiinu ulfa baasuun yakka yoo ta'u, kanneen yakka kana raawwatanis hidhaa waggaa afurii hanga 8 itti murtaa'a.
Haa ta'u malee, yeroo baayyee kan dubartii kanaa dabalatee, himannaan ulfa baasuun walqabatu gara yakka ajjeechaa cimaatti geedaramuun yoo xinnaate hidhaa waggaa 30 itti murteessutti geedarama.
Himannaan Hernández seenaa mana murtii biyyattii keessatti yoo himannaa gutummaatti geedaramu kan jalqabaati.
Duraan, dubartoonni ulfa ofiirraa baasuun himataman waggaa 30 ol itti murtaa'aa ture. Takkaa murteensaanii geedaramees hinbeeku.
"Gammachuun dhoohuufan jira," jettee jirti Abbokaatoon ishee Bertha Maria Deleon ergaa tiwitaraatiin. "Guyyaan harraa guyyaa haqa olaanaati.
"Dubartoonni atattamaan haqa barbaadan ammalleen waan jiraniif isaaniif qabsaa'uu ni dandeenya, itti fufuus ni dandeenya. Garuu harra gammadu dandeenya.''
Himannaan dubartii kanaa irra deebiin ilaalamunsaa, dubartoonni seera biyyatti ulfa baasuu akka yakka cimaatti ilaaluun hidhaman kan biraas murtee isaanii akka irra deebiin gaafataniif fakkeenya gaarii akka ta'u rogeeyyiin mirga dubartootaa ni abdatu.
Gareen duula ''Haqa Evelyn El Saalvaador keessaaf'' deegarsa taasifamee hundaa galateeffachuun ergaa dabarsaniiru.
Waajjira Motummoota Gamtoomaniitti Komishinnarri Olaanaa Mirgoota Namoomaa, El Saalvaador seera ulfa baasuu 'Cimaa' akka fooyyeessitu waamicha taasiseera.
Evelyn Hernández akka jetteetti, Ebla 6, 2016 osoo mana shee baadiyaa El Saalvaador jirtuu dhukkubbin garaa cimaan itti dhagahamuun dhiigni dhangala'e.
Achinis mana fincaanii manaan alatti argamu deemuun achitti of walaalte. Isaan booda haatishe gara mana yaalaa geessan. Hospitaala geenyaan akka deesse turte hakimoonni baran.
Hernández, wayita sanatti waggaa 18 turte. Namoota gareen nama gudeedaniin kan gudeedamte ture ta'ushee fi ulfaa'u konkumaa akka hinbeekne himte.
Sababii dhiiga darbee darbee argaa turteefu, akka laguutti yaaduun ulfaafi ciniinnaa garaa ta'u adda baasuu akka hindandeenye dubbatti.
"Akkan ulfa ta'e osoon beeke ture, dahumsa gammachuufi bonaan eegadha ture,'' jettee turte.
Hagayya 2017 keessa ammo, abbaan alangaa Hernández ulfa ta'ushee ni beekti jechuun yakkamtuudha jechuun murteesse. Achinsi hidhaa waggaa 30 kan itti murtaa'e yoo ta'u kana keessaa baatiiwwan 33 hidhamte jirti.
Dhimmishee maaliif irra deebiin ilaalame?
Abukaatowwan Hernández murtee abbaa alangaa irratti iyyannoo dhiyeefatan. Qorannoo wallaansaan mucaan kan du'e garaa keessatti ukkaamamee waan bobbaasaa soorateef akka ta'e mirkaneesseera jedhan. Kun kan ta'u ammo mucaan osoo garaa keessa jiruu, wayita dahumsaa ykn battaluma dhalateetti.
Abbokaatoowwan kunneenis dubartittiin mucaa ajjeessuuf yaalii homaa kan hingooneefi du'aatiinsaa karaadhuma umamaatiin jechuun morman. ''Yakki raawwatame homtu hinjiru'' jetti abukaatoon Hernández.
Guraandhala 2019, Manni murtii Olaanaa biyyattii ragaa hinqabu jechuun abbaa alangaa haaraan irra deebiin akka ilaalamuuf murte bara 2019 darbe haqee.
Abbaan alangaa dhadacha irra deebii ammo siriiyyuu hidhaa cimaa kan duran itti murtaa'e caalu waggaa 40 gaafate.
Dhimmichi maaliif hangas ulfaatee?
Dhaabbilee mirgoota namoomaa biyyattii keessatti hojjatan akka jedhanitti yoo xinnaate dubartoonni 17 sababiidhuma seera kanaatiin hidhaa irratti argamu.
Waggaa 10 darban keessas qaamooleen duula gaggeessan dubartoota 30 ta'an ragaansaanii irra deebiin ilaalame akka bilisa bahan taasisaniiru.
Irra deebiin himannaan yoo ilaalamu kan Hernández kun aangoo pirezidaantii biyyattii haaraa Nayib Bukele jalatti kan jalqabaati. Isaan baatii Waxabajii kan aangootti dhufan yoo ta'u, qaamoleen mirgoota dubartootaaf qabsaa'anis, dhimmicharratti dubartootaaf jijjirama akka fidan abdataniiru.
Pirezidaant Bukele gama isaaniin ulfa baasuu nan morma garuu dubartoota ulfi irra bahuun yakka ulfa baasutiin shakkaman waliin nan gaddas jedhaniiru.
Dubartiin El Saalvaador mucaa du'aa dahumsasheetiif waggaa 30 itti murtaa'e gadhiifamte